Qayb 2aad, Ma la Socotaa in Jwxo-shiil, Dhalinyarada Somalida Ogadeeniya ee Cwxo uu u Gumeeyey Eritrea? – Rasaasa News
Qormaii 1aad ee Adoonsiga Eritrea ee Dhalinyarada Somalida Ogadeeniya waxay inoo joogtay, ciidanka raacii kowaad oo dhamaystay tababarii iyo raacii labaad oo Casab soo gaadhay.
xiligaas waxay ku beegnayd sanadkii 2003, labo sano oo hor lehna loogu daray Jwxo-shiil kolkii ay kadhamaatay aarii sano ee xilka, Isla xiligaasna waxaa xerada tababarka madax looga dhigay Bashiir Axmed Makhtal isla markaasna ahaa taliyaha ciidamada ONLF.
Madaxda Jabhadu waxay doonayeen in raaca kowaad ee ciidanku uu galo Ogadeeniya, laakiin Jwxo-shiil iyo Qaaxo waxaa u socday qorshe qarsoodi ah oo ay la gaadheen saraakiil sare oo Eritrean ah wayna ka gaws qabsaden in cidanku uu galo gudaa inta lagu jiro xiliga gugga.
Qorshahaas oo ahaa in ciidamada ONLF ee jooga dalka Eritrea ay ka qayb qaataan waxa soo saarka dalka Eritrea. Kolkii dhawr goor dib loo dhigay in ciidamada tababarku u dhamaaday la galiyo Ogadeeniya, ayaa rag ka mid ah madaxda Jabhadu ay muujiyeen niyad xumo, balse ay waajib ahayd in ay xaq dhawraan go,aanka hogaanka Jabhada.
Hadaba, meeshii laga sugayey in ciidanka loo diyaariyo sidii ay u bixi lahaayeen ayaa xeradii tababarka ee Galaal xoor laga soo buuxiyey qalabka beeraha lagu falo. Ciidanka waxaa loo sheegay in xukuumada Eritrea ay tahay dawlad yar oo aan lahayn dhaqaale qaybsama Jabhadana looga baahan yahay in ay la soo baxdo wixi ay ciidamadeedu cuni lahaayeen, daawada wixii loogu gadi lahaa iyo arad baxba.
“Waxaa Xerada Galaal Xoor xili habeen ah noo yimid saraakiishii Eritreanka ahayd ee xerada haystay iyo masuuliyintii Eritrea u joogay Jabhada ONLF oo ahaa Maxamed Ismaaciil [Qaaxo] yo Bashiir Axmed Makhtal. Waxaa naloo sheegay in xukuumada Eritrea ay na siisay dhul beereed naguna taageertay qalabka Beeraha laggaga shaqeeyo si aanu wixii ka soo baxa Beerahaas ay u daboolaan baahida ciidamada ONLF” sidaasina waxaa yidhi N/hure ka tirsan cidanka ONLF.
Xerada waxaa ka jiray Baahi xoog badan, oon, gaajo iyo bukaano ciidanka ah, wax dawo ah oo ay heli jireen ma jiraan kuwa naga bukooda, kuwa na xukumayey ee aanu wada dhalanay waxaa nooga naxdin roonaa Eritreanka, inta aan ogahay waxaa dhibaato cudur iyo gaajo sugu jira ugu dhintay xerada dhaxdeed 16 wiil.
Waxaanu subax walba aadi jiray beeraha anaga oo dhawr boqol ah, waxaanu beeray Basal, Galleey iyo baradho, waxaanu mudo muddo dheer ka shin tirinaynay xiliga ay beerahani bislaan doonaan sidii geel rimay ah. Waxaa la gaadhay xiligii goynta waxaanu guraynay midhaha beeraha habeen iyo maalinba, jawaano ayaanu ka buuxinay, waxaanu ku raray baabuurta Nayntiinka loo yaqaan, waxaanu dhabarka kaga dajinay bakhaaro waaweyn oo uu ku jiro raashinka kaydka ah ee dawlada Eritrea.
Waxaa muddo nalagu maaweelinayey midhihii waa la gaday waxaana la idiin soo gadi doonaa dawooyin, dhar iyo raashin fiican. Wax naggaga soo noqda daaye habeen si wanaagsan raashinkii aan beeray haakah ugama aanaan odhan.
Waxaanu bilownay in aanu waydiino saraakiishii Eritrea aaway malkii aanu beeray, Nagash oo ahaa kabtan ah taliye xigeenka xerada wuxuu nagu yidhi “waraysta madaxdiina”, qayladii waxay gaadhay Jwxo-shiil,waxaana na loo soo diray Qaaxo oo uu la socdo Bashiir Axmed Makhtal. Iska daa qancin ay na qanciyaane waxay ku rideen god ciqaabeed ragii waydiiyey su,aalaha ah aaway lacagtii lagu gaday beertii aan beeray. Waxaa uu Qaaxo xidhay 41 will oo ciidanka ONLF ka mid ahaa, 10 ka mid ahna waxaa dil ku xukumay Bashir Axmed Makhtal.
Waxaana N/hurayaalkii u heelanaa halganka ee ayna jirin cid ku soo qasabtay imaatinka Eritrea in ay arintii isu badashay is adoonsi iyo cir kaa dheer dhul kaa dheer, juuq ruuxii yidhaahdana jeel amug lagu siiyo.
Sheekadan waxaa na soo gaadhsiiyey wiil ka mid ahaa raacii ugu horeeyey ee ciidamadii ONLF ee tababarka loo geeyey xeebta ciqaabta iyo kala dirka ururka ONLF ee Eritrea, kolka uu sheekadan noo sheegayeyna waxaa indhihiisa ku soo joogsanayey ilmo.
Waa inoo qayb saddexaad ……
Kooxda Jwxo-shiil oo Meherad ka Dhigtay Sawiro Qaxootiga Dhadhaab Laga Qaaday “silent cry”